आमाको हत्या, बाबु जेलमा, ६ नाबालकको बिचल्ली, हजुरआमा भन्छिन् – आमा भन्दै रुन्छन्, कसरी हुर्काउँ ?
Thu, Apr 19, 2018 | 17:28:19 NST
17:11 PM (9months ago )
गोविन्द शर्मा/उज्यालो ।
बाँके, साउन १ – बाँकेको कोहलपुर–४ बेलनपुरका १० वर्षका एक बालकको काँधमा ६ जना भाइबहिनीको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । बुवाले आमाको हत्या गरेपछि बिचल्लीमा परेका भाइबहिनीको जिम्मेवारी १२ वर्षका जेठा दाजु सुिनल भनिने मो. तसिब खाँको काँधमा आइपुगेको हो । बुवाले आमाको हत्या गरेपछि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–४ बेलनपुरवाका–६ जना नाबालकको बिचल्ली भएको छ । आमाको हत्या भएपछि ६ जना बालकहरु अहिले मामाघरका हजुरबुवा, हजुरआमाको संरक्षणमा छन् । कोहलपुर–४ का २९ वर्षका मोहम्मद अफताब बेडुवाले २५ वर्षकी श्रीमती फुलसन बेडुवाको सोमबार राति १० बजे चक्कु प्रहार गरेका थिए । हत्यापछि राति नै श्रीमतीको टाउको लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय कोेहलपुरमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । घटनापछि बुवा प्रहरी हिरासतमा छन् भने ६ जना नाबालकहरु मामाघरमा बस्दै आएका छन् । १२ वर्षका सुनिल भनिने मो. तसिब खाँ, वर्ष १० का सुशील खाँ, ८ वर्षका तसलिम, ६ वर्षिया इस्मा, ४ वर्षिया इल्मा र अढाई वर्षिया रहिस्माको पालनपोषण र शिक्षामा समस्या आएको छ । ६ दाजुभाइमध्ये माइला सुशील, कान्छा तसलिम र जेठी छोरी इस्मा गाउँकै विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन् । छोरी गुमाएको पीडामा रहनुभएका हजुरबुवा सौकत अलीले स–साना बालकहरुले रातभरी आमा–आमा भनेर बोलाइरहँदा आफूहरुले नातिनातिनालाई सम्झाउन नसक्ने बताउनुभयो । ६ जना नातिनातिना मामाघरमा बस्दै आएको भएपनि घर परिवारले कुनै वास्ता गरेका छैनन् ।